I-Blue Cottage - I-Airbnb
Springfield, New Brunswick, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Corey
Indlu ethokomele yasemanzini etholakala eduze kweBelleisle Bay eNew Brunswick! Leli yikotishi elihle kakhulu lokubalekela ehlobo. Yindawo enhle yokubiza ikhaya ngenkathi uhlola zonke izinto zangaphandle ongazinikeza. Noma uma ukulala ku-hammock ufunda incwadi ngenkathi uthatha ukushona kwelanga kuyiholide lakho elifanele - ungakwenza lokho nawe.
Ikotishi elithokomele lisendleleni ethule edlula ngasosebeni lwe-Bay nabanye abanikazi bamakotishi abanobungane abaningi. Ngaphakathi uzothola ikhishi eligcwele eline-nook yasekuseni, indawo yokudlela evulekile yomqondo kanye nendawo yokuhlala ebheke i-bay, amagumbi okulala amathathu kanye nebhavu eligcwele. Isitezi esikhulu siyindawo ekahle yokujabulela ama-BBQ kanye nokushona kwelanga ngaphesheya kwetheku elinikeza isibhakabhaka esinemibala emihle. Kunegceke elikhulu elingemuva elilungele imidlalo yangaphandle. Thatha isihlwathi santambama ku-hammock noma wosa ama-marshmallow emlilweni ebusuku. Ukwenza leli kotishi libe isisekelo sakho sekhaya ukuze ubaleke ethule kuzoba yisinqumo ongeke uzisole ngaso.
Ichweba lilungele noma yiluphi uhlobo lwemisebenzi yamanzi kusukela ku-kayaking kuya ezikebheni ezinamandla. Uhlelo lwamanzi lukuvumela ukuthi uhambe ezindaweni eziningi ezifana neKingston Creek, Evandale, Gagetown, Grand Lake noma ngisho nedolobha laseFredericton. Kukhona indawo yokwethula isikebhe sakho phambi kwekotishi.
Njengababungazi sihlala endlini encane engumakhelwane isikhathi esiningi sasehlobo. Siyajabula ukukusiza nganoma yini ongase uyidinge noma uqhelelane nathi. Noma ngabe ukhetha ini.